कस्तो दुर्भाग्य ! बिरामी भएर ऐतिहासिक अवसर गुमाए खानेपानीमन्त्री थापाले Nepalpatra कस्तो दुर्भाग्य ! बिरामी भएर ऐतिहासिक अवसर गुमाए खानेपानीमन्त्री थापाले
काठमाडौँ । अथक मेहनत गरेपनि जीवनमा कहिलेकाहीं भाग्यले साथ दिंदैन । यस्तै संयोग भएको छ – खानेपानीमन्त्री मणि थापालाई । जीवन भनेकै उकाली ओराली भन्ज्यांग चौतारी हो भने झैँ मानिसको जीवनमा उतारचढाव आउने गर्छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले औपचारिक वितरणको सुरुवात गरेतापनि बिडम्बनाको कुरा अहोरात्र खटेर आज काठमाडौंमा खानेपानी वितरणका लागि औपचारिक उद्घाटन समारोहमा भने मन्त्री थापा उपस्थित हुन सकेनन् । पारिवारिक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्री थापा ३ दिनदेखि हल्का बिसञ्चो भएका थिए ।
उनलाई आज बिहानदेखि बढी नै अवस्था केहि जटिल भएपछि कार्यक्रममा अनुपस्थित भएका हुन् । खाना खान मन नलाग्ने, टाउको दुख्ने समस्याका कारण अहिले मन्त्री थापा निवासमै आराम गरिरहेका छन् । थाेरै विसञ्चाे महसुस भएपछि आज दिउसो कोरोना संक्रमणको आशंकामा उनले काेभिड-१९ परिक्षणका लागि स्वाब समेत दिएका छन् ।
#कस्तो दुर्भाग्य !